"UMelania Trump ehamba ze" ngowona ukhangelwe kwiGoogle Spain | Iindaba zeGajethi
"UMelania Trump uhamba ze" ngowona ukhangelwe kwiGoogle Spain kwezi ntsuku
Sothuke kakhulu kwaye asinakukunceda, kuba amaSpanish ayazi ngaphezu kwakhe nabani na ukuba abone icala elilungileyo lezinto, ke, emva kokubona umfazi kaDonald Trump kwiindaba kwihlabathi liphela, saba nentandabuzo enkulu malunga nelizwe uMelania Trump kwimpahla yangaphantsi. Ubuncinci yile nto esinokuyikhupha kwiziphumo zamva nje zophando lukaGoogle eSpain, kwaye kunjalo Amagama "uMelania Trump ehamba ze" asetyenziswa kakhulu kwinjini yokukhangela edumileyo kwiintsuku zakutshanje eSpain.
Ukucacisa ngakumbi, "uMelania Trump ehamba ze" ibingumkhwa ukusukela nge-9 kule nyanga, malunga neyesithoba kusasa, ukuze kamva bathi asingabo abavuka kwangoko, izinto zokuqala kuqala. Kodwa Ayiloxesha lokuqala iGoogle Spain yayindlwane yokukhangela kwi-Nenekazi laseMelika elizayo ngaphandle kweempahlaSele yenzekile ngoJuni kulo nyaka xa iifoto ezithile ezinobungozi zavuza. Kwaye iLatinos "ishushu" kakhulu, kwaye yonke into ijongeka ingcono ngaphandle kokuba kunokwenzeka iimpahla, nangona kunjalo, sifuna ukukhumbula ukuba eSpain kusebusika, asizukubanjwa yingqele.
Ukuba unomdla kweli nqaku, ndwendwela oogxa bakho Vice, ababone kufanelekile ukuba benze i-infographic enomdla ngayo, kunye neegrafu kunye nokuthelekisa kokubini ngexesha nangokwemiqathango. Nangona kunjalo, ezona zinto zisisiseko zomntu zilawula kwi-Intanethi, siyakhumbula ukuba elona shishini linye kwi-Intanethi liyi-pornography, I-12% yewebhusayithi yenethiwekhi yenethiwekhi iphonografi, kwaye baphatha i-25% yokukhangela okupheleleyo, ishishini elingenasiphelo elibonakala lingaze liye ezantsi, enyanisweni, liya lisomelela ngokomelela kwaye sijonge phambili kwiphulo leKrismesi leRedTube elinomdla kulo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » "UMelania Trump uhamba ze" ngowona ukhangelwe kwiGoogle Spain kwezi ntsuku
Yakha eyakho iNES Classic Mini, ngemidlalo emininzi kunye nokubonga okungabizi kakhulu kwiRetroPie